"Haddii Siyaasaddu Tahay Sheeko iyo khidad Laysu Dagaayo, Qofkasta Oo Somalilander Ahina Waa Cod-bixiye Awood Leh Doorashana Raba"/Qalinkii Cabdalle Samiir Gaaxnuug.
Wednesday December 15, 2021 - 17:57:39 in by Super Admin
Marka ay timaado doodaha furista ururada siyaasiyiin badan ayaa hanqalka la soo kaca, kuwaas oo hore uga niyad-jabsan
xusbiyadi siyaasada Waddani, Ucid, Kulmiye ee sharciyada haystay. Waxayna fursad ka raadiyaan dhawaaqyada lagu doonayo ururada, iyagoo ka cararaaya dibad wareegi shalay ku dhacay ee boos la’aanta siyaasada, waxayna tamar ka dhiganayaan waqtigii ururada la jooga iyo xaq dastuuriya weeye in la furo ururada.
Waxayn daawanay wasiirka warfaafinta Suleyman Ali Koore ,oo ku hadlaaya Afka madaxwaynaha inuu ku dhawaaqay furista ururada, taasna waxan ku tilmaami karaa inay tahay xayaysiis siyaasadeed waana fashilmeen, waxay noqotay war xasuus leh oo kulayl iyo kuduudyo badan ku riday siyaasiyiin badan, se waxaynu ku dhaafaynaa in si fiican loo soo saaray laxanka diyaarintaas. Laakiin ka waran haddii guuldarada xayeysiinta siyaasadeed, ugu yaraan qayb ahaan, ay tahay fashilka mala-awaal? Ku dhawaad dhammaan xayeysiisyada siyaasadeed, ha ahaadeen kuwa musharixiinta ama gudoomiyasha xisbiyada waxyeelaya, waxaa loo soo saaraa si loo gaadho yool aad u yar, xukumada kulmiyena waxa ku haboon inay la timaado qorshe cad oo ku aadan ku guuleysiga doorashada soo socota.
Sidoo kale xukumada kulmiye waxay dabada ka riixaysa ololaha lagu raadinaayo hirgalinta xeer no: 14, iyadoo ka danaynaysa inay abuurto khilaaf sharci, kala daadin isku doobnidii xilibaaanadii badnaaye mucaaridka, iska horkeenid gudoomiyaha wakilada & xusbigiisa waddani iyo mudo korodhsi lagu rabo markuu muranku bato in xal ogaalsho ah laga helo mucaaridka.
Dhanka mucaaridkuna waxay ku adkaysanayaan in ay diyaar u yihin tartanka ururada, se waqtigeeda lala sugo iyagoo awooda saaraya xilibaanada badan ee ka soo baxay mucaaridka, gudoomiyaha shir-gudoon A/risaq khalif iyo dayacaadi jaaniskii hoos maray madaxwaynaha ee celinta xeer no :14. Waxana hubaala waqtigan inagu soo food leh, ay gabaabsi tahay mudada madaxwayne Muse Biixi, oo doorashadiisi ku began tay November 13, 2022, culayska badan inay saran qabashada doorashada madaxwaynahana waxa ku jirta hanaqaadka Dimuquraadiyada, ka takhaluska mudo kordhin iyo dabaysha guusha oo doorkan la socota mucaaridka, iyagoo ka duulaaya doorashadii isku sidkanaydee Golaha deeganka iyo Wakilada oo badankooda heleen. Waxana marag ma doona inay mucaaridku leeyihin awood siyaasadeed oo ka badan intay garanayaan haday iskaashadaan.
Waxa muuqata siyaasad wareejintii lagu sameeyey xusbiga waddani, ee loo cumaamaday gudoomiye Hersi Ali H Hasan iyo murashaxa Abdirahman cirro ee la kala qaaday, inaanay saamayn ku yeelan beesha bariga burco oo aanay kaba dagin inay leeyihin xusbiga waddani, oo xilibaanadoodu korkacayaan in la dhaqan galiyo furista ururada, xaqiiqna in la beddelo fikradaha dadka ee ku saabsan siyaasadda waa adag tahay hadaan xal loo helin.
Kulmiye wuxu rabaa inuu ka faa’idaysto dhaqdhaaqa muwaadiniinta leh waanu soo dhawaynaynaa ururada, ogowna hadii siyaasadu tahay sheeko iyo khidad laysu dagaayo, qofkasta oo Somalilander ahina waa cod bixiye dareenkisu waxtar leeyahay cidii ku dedaasha. Xalada ka aloosan golaha wakiladuna wuxun buu ku dhamaanaysa codayn ah, sadex meeloodaw laba meelood (2/3) inay ku meel mariyaan dhaqan galka xeerka no 14 iyo in lays ku qanciyo doorashooyinka guud ahaantood.